प्याजको बोक्रा फाल्नुहुन्छ ? नफाल्नुस, यस्ता छन् फाइदा « Janata Samachar
प्याजको बोक्रा फाल्नुहुन्छ ? नफाल्नुस, यस्ता छन् फाइदा
काठमाडाैं । हामी प्याजको बोक्रालाई फोहोर सम्झेर फाल्दिन्छौँ । हामी अधिकांश मानिस प्याजको बोक्राको फाइदाबारे अनविज्ञ छौँ ।प्याजको बोक्रामा अत्याधिक पोषक तत्व पाइन्छ, जसले हाम्रो स्वास्थ्यका साथसाथै छालालाई सुन्दर बनाउन पनि सहयोग पुग्छ । भिटामिन ए, सी, इ र कयौँ एन्टीअक्सीडेट्सले भरिपूर्ण प्याजको बोक्रामा एन्टीइफ्लेमेट्री पनि पाइन्छ । प्याजको बोक्रामा क्वेरसेटिन उच्च मात्रामा पाइन्छ, जसले रक्तचाप कम गर्न र धमनी सफा गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसले हृदयघातको जोखिम कम गर्दछ।
यस्ता छन् प्याजका बोक्राका फाइदाहरु
एक अध्ययनका अनुसार प्याजको बोक्रामा फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। साथै, यसमा रहेका फ्लाभोनोइड्स, क्वेरेसेटिन र फेनोलिक शरीरलाई क्यान्सर जस्ता समस्याबाट जोगाउन निकै प्रभावकारी हुन्छ।
–घाँटी सम्बन्धी समस्यालाई कम गर्दछ
प्याजको बोक्राले हाम्रो घाँटी सम्बन्धी समस्यालाई कम गर्न मद्यत गर्छ । प्याजको बोक्रालाई पानीमा भिजाएर वा चियासँगै उमालेर पिएमा घाँटीको दुखाइ र अन्य समस्यामा राहत मिल्छ ।
–छालाको एलर्जी कम गर्न सहयोग गर्दछ
प्याजको बोक्राले छालाको एलर्जी निको बनाउन समेत मद्यत गर्छ । यसका लागि प्याजको बोक्रालाई एक रात पानीमा भिजाउनुपर्छ । यसरी भिजाइएको पानी र प्याजको बोक्राले छाला सफा गर्नुपर्छ । यो प्रयोग गरेको केही दिनमा नै एजर्लीबाट राहत मिल्न थाल्छ ।
–कपाल लामो बताउँन मद्यत
छिटो कपाल बढाउनका लागि प्याजको बोक्रा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्याजको बोक्रा र चियाको पात पानीमा उमाल्ने र यसरी उमालेको पानीले कपाल धुनुपर्छ । निरन्तर यस्तो पानीले कपाल धुनाले कपाल लामो, बाक्लो हुनुका साथै चाँयाको समस्या भए कम भएर जान्छ ।
–मांसपेशी बाँउडिने समस्या कम गर्छ
प्याजको बोक्रा भिजाएको वा उमालेको पानी प्रत्येक साँझ सुत्ने बेला पिउनाले खुट्टा दुख्ने, मांसपेशी बाँउडिने समस्या कम हुन्छ । यसका लागि प्याजको बोक्रालाई कम तापक्रममा १५ मिनेट जति उमाल्ने र प्रत्येक साँझ एक कप पिउने गर्नुपर्छ ।
–छाला गोरो बनाउन
छालालाई सेतो र चमकदार बनाउन प्याजको बोक्रा उपयुक्त हुन्छ । यसको लागि प्याजको बोक्राको रस हल्दीमा मिसाउने र अनुहारमा लगाउनु पर्छ । यसले अनुहारको दाग हटाउन समेत मद्यत गर्छ र अनुहारमा गोरोपना बढाउन र चमक ल्याउन मद्यत पुग्छ ।
विश्वभर ८ करोड ८२ लाख संक्रमणमुक्त, २४ लाख ९४ हजारको मृत्यु
काठमाडौं । विश्वभरमा आठ करोड ८२ लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरसका बिरामी निको भएका छन् ।
विश्वभर ८ करोड ७७ लाख संक्रमणमुक्त, २४ लाख ८४ हजारको मृत्यु
काठमाडौं । विश्वभरमा आठ करोड ७७ लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरसका बिरामी निको भएका छन् ।
कोरोनाविरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा ८ हप्तापछि दिइने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो
कोरोना खोप खरिदमा अनियतताको आशंका, २० लाख खोपलाई २५ करोड बढी तिरेको पुष्टि
काठमाडौं । नेपालले भारतबाट किन्ने भनिएको २० लाख डोजमध्ये पहिलो खेपमा १० लाख डोज कोरोना